Waa Maxay ujeeddada kulanka uu Madaxweynaha ka codsaday Baarlamaanka ee Beesha Caalamku diidan tahay? - Jowhar somali news leader
Home NEWS Waa Maxay ujeeddada kulanka uu Madaxweynaha ka codsaday Baarlamaanka ee Beesha Caalamku...
Waa Maxay ujeeddada kulanka uu Madaxweynaha ka codsaday Baarlamaanka ee Beesha Caalamku diidan tahay?
Kadib kulankii uu Madaxweynaha uu la galay safiirrada beesha caalamka 28kii bishii hore ee lagu cadaadiyay ka qeybgalka shirka Dhuusamreeb iyo xal u helidda arrimaha cakiran ee doorashada waxa uu ku dhawaaqay shir 3 maalin soconaya, kadibna uu 5ta bisha baarlamaanka hor tagayo arrinkaan oo su’aalo badan ka dhasheen sababta uu madaxweynuhu ugu baahan yahay kulanka baarlamaanka.
Jowhar.com ayaa ogaatay in madaxweyne Farmaajo uu raadinayo muddo kororsi sanad ah oo ay baarlamaanka u kordhiyaan hay’adaha dowladda, isaga oo qaaday dhowr tallaabo oo uu arrinkan ku xaqiijinayo:
1- U yeerista Guddoomiya Golaha Shacabka:
Dhammaadka bishii hore ayuu Madaxweyne Farmaajo u yeeray guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, isaga oo ka codsaday in uu kala shaqeeyo muddo kordhin hay’adaha dowladda loo sameeyo oo ay u dhaxeysa sanad ilaa laba sano, muddadaas gudaheedana ay xal u heli doonaan arrimaha taagan oo ay ku jirto kursigiisa xildhibaan.
Beesha caalamka oo arrinkaan ka war heshay ayaa diginin u diray guddoomiye Mursal sida aan ka soo xigannay ilo dulamaasiyadeed oo ku sugan Xalane, iyada oo lagu wargeliyay in uusan ka shaqeyn karin wax khilaafaya nidaamka doorashada ee lagu heshiiyay aarinka muddo kordhintana aysan taageeri doonin saaxiibada Soomaaliya.
2- Xiriirka Xildhibaannada:
Laga soo billaabo bartamihii bishii January Madaxweynaha waxa uu xiriir toos ah la sameeyay xildhibaanno saameyn ku dhex leh baarlamaanka oo u badan kuwa beelaha Muqdisho ee mucaaradsan maamulkiisa isaga oo kala hadlayay in ay taageeraan muddo kordhinta sanadka ah.
Xildhibaannada iyo sentorrada uu madaxweynaha la xiriiray qaarkood ayaa Jowhar.com u xigatay in uu madaxweynuhu ku yiri “Sida aanan anigu u hubin in dib la ii dooranayo ayaad idunkuna uga walwaleysaan in dib la idiin doorto. Isku dan ayaan nahay ee aan wadashaqeyno”. “Waxbaan noo goyn karaa haddaad igarab istaagtaan, guddoonka waa dhankeena ee waxaa muhiim ah In uusan buuq dhicin” ayuu raaciyay.
3- Taageerada Qatar:
Dowladda Qatar oo ka walwalsan danaheeda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si toos ah u soo faragelisay arrimaha doorashada iyada oo safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Bin Xamse oo kulamo xasaasi ah la yeeshay siyaasiyiin, ganacsato iyo oday dhaqameed ka tirsan beelaha Muqdisho isaga oo isku dayay in uu ku qanciyo taageerada Madaxweyne Farmaajo si muddo kordhin loogu sameeyo.
Kulamada uu la galay wasiirrada beelaha Hawiye qaarkood ayaa laga soo xigtay in dowladdiisu bixineyso wax walba oo dhaqaale ku saabsan iyaga dhankoodana looga baahan yahay taageerada beeshooda, gaar ahaan haddii loo baahdo awood ciidan.
Qatar oo horay aan si toos ah u soo faragelin arrimaha Soomaaliya balse la aaminsan yahay in ay soo dhex mareysay masuuliyiin dowladda ka tirsan oo saameyn badan leh ayaan la ogeyn xilligan sababta keentay in ay si toos ah faraha ula soo galaan arrimaha doorashada.
Baarlamaanka oo muddo kordhin u sameeya madaxweynaha iyada oo uu yaallo heshiiskii 17kii September 2020 waxa ay dhalin kartaa; Amniga oo faraha ka baxa taas oo qaadan karta muddo dheer in kala dambeynta dib loo soo celiyo iyo taageerada beesha caalamka oo meesha ka baxda, taa la macna ah in dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba ay Soomaaliya burburto.
Previous articleNigeria’s Okonjo-Iweala quits WTO top job after South Korean rival withdraws
Next articleNew mutation in more contagious British variant raises concerns